मुसिकोट नपामा ५५ किमी वाटो ग्राभेल, १ सय ६१ किमी बाटो थपियो: निति तथा कार्यक्रमको मध्यवधी समिक्षा – Gulminews
Home/जिल्ला समाचार/मुसिकोट नपामा ५५ किमी वाटो ग्राभेल, १ सय ६१ किमी बाटो थपियो: निति तथा कार्यक्रमको मध्यवधी समिक्षा
मुसिकोट नपामा ५५ किमी वाटो ग्राभेल, १ सय ६१ किमी बाटो थपियो: निति तथा कार्यक्रमको मध्यवधी समिक्षा
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७६ असार ३, मंगलवार ०१:२२ मा प्रकाशित
गुल्मी, २ असार । मुसिकोट नगरपालिकाको निति तथा कार्यक्रम सम्बन्धि मध्यवधि समिक्षा एवं सुझाव संकलन कार्यक्रम वामीटक्सारमा सम्पन्न भएको छ । कृषि पर्यटन पूर्वाधार र रोजगार, समृद्ध मुसिकोट नगरपालिका को आधार भन्ने नारासहित सुरु भएको कार्यक्रममा विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरुले स्थानिय सरकार स्थापना पछि हाल सम्मको प्रगति तथा भावी योजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार नगरपालिकाले २ वर्षमा झण्डै १५ सय वढि कृषकलाई व्यावसायीक कृषि तथा पशुपालन तर्फ आर्कषण गराउन अनुदान सहित सामाग्रि वितरण गरेको छ। आगामी वर्ष ४० हजार कफि विरुवा लगाउने, २१ हजार वढि फलफुल वोट लगाउने, ३ सय वढि प्लाष्टिक टनेल निर्माण गर्ने ३० रोपनी क्षेत्रमा अलैंचि वगैँचा निर्माण गर्ने, ५ सय घरमा करेसावारी, ५ सय मौरिघार वितरण लगाएतको योजना वनाएको छ। स्वास्थ्य तर्फ मुसिकोट नगरपालिकाले अत्याधिक फड्को मारेको छ।
नगरपालिका भित्र २४ सै घण्टा सेवा दिनेगरि अत्याधुनिक टेवल सहित वर्थिङ सेन्टरको व्यावस्थापन गरिएको छ। सवै वर्थिङ सेन्टरमा सोलार सिस्टमको व्यावस्थापन गरिएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रति वैठक यातायात खर्च जनहि ५ सय व्यावस्था गरिएको छ भने वडा नं. १ को थामडाँडा र वडा नं. ८ को वामी मैदानमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। वामीटक्सार स्वास्थ्य चौकीमा ल्याव सेवाको स्थापना गरिएको छ भने नगरपालिकाले विभिन्न समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरु सहित निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण सेवा दिँदै आएको छ। आगामी वर्ष ८४ वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने योजना वनाएको छ।
शिक्षा तर्फ सवै विद्यालयमा विद्युतिय हाजिरि सुरु गर्दै सोहि आधारमा तलब निकासा गरिने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। नगरपालिकाले ५ ओटा विद्यालय समायोजन गर्दै २३ शिक्षक दरवन्दि मिलान गरेको छ भने प्राविधिक धार सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई ५० लाख अनुदान वितरण गरेको छ । खानेपानी सरसफाई तर्फ ८ सय ५३ परिवारमा एकघर एक धारा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ भने २३ सय २२ घरमा धारा पुर्याउने योजना चलिरहेको छ।
संस्कृति प्रवद्र्धन र पर्यटन विकासमा पनि नगरपालिकाले काम गरेको जनाएको छ। स्वाँरा होमस्टेलाई व्यवस्थित गरेको, मालिका मन्दिर, मुसिकोट दरवार, शालिमे दह लगाएतलाई संरक्षण गरि पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। जातिय पहिचान वोकेका विभिन्न नाच तथा भाषालाई संरक्षण गर्ने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ।
त्यस्तै २ वर्षको अवधिमा मुसिकोट नगरपालिका भित्र ५५ किलोमिटर मोटरवाटो ग्राभेल भएको छ भने १ सय ६१ किलोमिटर मोटरवाटो थप भएको छ भने सडक मर्मतको लागी मर्मतकर्ताको व्यावस्थापन गरेको छ। त्यस्तै पूर्वाधार तर्फ नै १४ किलोमिटर पक्की कूलो निर्माण गरिएको छ भने १८.५ किलोमिटर कच्चि कुलो निर्माण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। २ वर्षको अवधिमा नगरपालिका भित्र ९ ओटा महिला सामुदायीक भवन निर्माण भएका छन् भने ४ सय १२ खरका छाना भएको घरमा जस्तापाताले विस्थापन गरिएको छ। यो अवधिमा नगरपालिका भित्र विभिन्न प्रयोजनको लागी १ सय ४० रोपनी भन्दा वढि जग्गा निशुल्क प्राप्त भएको छ भने १५ रोपनी भन्दा वढि जग्गा खरिद गरिएको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ। २ वर्षको अवधिमा उज्यालो नगर घोषणा भएको छ भने २ सय ७० ह्यामपाइपको प्रयोगवाट ढल व्यवस्थित गरेको छ। वन वातावरण तथा विपद्व्यावस्थापनको लागी नगर स्तरीय वन नर्सरी स्थापना गरि वृक्षारोपण, तथा वडिगाड र निस्ती खोलाका विभिन्न स्थानमा तटवन्धका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
त्यस्तै चालु वर्षमा न्यायीक समितिले १० ओटा मुद्धाको फैसला तथा मिलापत्र गरेको छ भने ४ ओटा मुद्धा प्रक्रियामा रहेका छन्। नगरपालिकाले हाल सम्म २० वटा ऐन र २४ वटा नियमावली तथा कार्यविधि तयार गरेको जनाएको छ।
नगरपालिका भित्र ७० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा १० प्रतिशत ज्याला मजदुरीमा, ५ प्रतिशत व्यापार व्यावसायमा ३ प्रतिशत नोकरी र १२ प्रतिशत समुदाय वैदेशिक रोजगारीमा रहेको छ।
सो कार्यक्रम नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टिका नगर संयोजक खुम बहादुर थापाले नगरले प्रभावकारी काम गरिरहेको वताउनु भएको थियो। नेपाली काग्रेसका नगर सभापति सुदर्शन शाक्यले योजनाहरु संचालन गर्दा उपभोक्ता समितिमा राजनैतिक समावेशिकरणलाई ध्यान दिन र प्रतिपक्षले पनि अपनत्व लिन सक्ने गरि कार्य सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काग्रेसले गठन गरेको मुसिकोट छायाँ सरकारका प्रमुख झविलाल भण्डारीले योजना खण्डीकरण नगरी एकिकृत ढंगले सञ्चालन गर्न सुझाव दिनुभएको थियो। अपांग परिचय पत्र वितरणमा केहि ले खाइपाई आएको सुविधा काटिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत प्रकट गरिएको थियो। कार्यक्रममा सहभागिहरुले आगामी निति तथा कार्यक्रमको लागि विभिन्न सुझावहरु दिएका थिए। छलफल पछि नगरप्रमुख सोमनाथ सापकोटाले कार्यक्रममा आएका सुझावलाई आगामी निति तथा कार्यक्रममा समेटेर लैजाने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो।
सो कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, पत्रकार लगाएत स्थानियहरुको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको उद्धेश्यमाथि आर्थिक समितिका संयोजक समेत रहनुभएको वडा नं. ७ का अध्यक्ष प्रकाश काफ्लेले प्रकाश पार्नुभएको थियो। कार्यक्रम मेयर सोमनाथ सापकोटाको अध्यक्षता, उपमेयर कमला शर्माको स्वागत मन्तव्य तथा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नवराज भण्डारीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो।